🥇 ▷ Saynisyahanadu waxay ku daabacan karaan isku-xirnaanta vascular adag iyo daabacaadda 3D ✅
Saynisyahanadu waxay ku daabacan karaan isku-xirnaanta vascular adag iyo daabacaadda 3D
Baarayaasha Jaamacadda Rice iyo ka Jaamacadda WashingtonDalka Mareykanka waxaa lagu daabacayaa maqaal ay ku andacoonayaan inay awood u yeesheen inay abuuraan shabakado isku dhafan xididdada Daabacaadda 3D. Tani waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday abuurista xubnaha dabiici ah oo si weyn u caawin kara yareynta khadadka dhaadheer ee ku-tallaalidda mustaqbalka.
Waqti dheer kahor inta aysan dawladu bilaabin inay kahadasho suurtagalnimada abuuritaanka xubnaha 3D-daabacan, cilmi baarayaashu waxay raadinayaan hab ay ugu abuuraan xubnaha sheybaarka, laakiin vascularizationkooda waligood waxay ahayd dhibaato. Xubnaha dabiiciga ahi waxay adeegsadaan a shabakad qani ah oo iskuxiran oo xididdada dhiigga si loo qaato nafaqooyinka iyo oksijiinka oo sii shaqeyso. Diidmada nidaamyadan waxay ahayd caqabad maxaa yeelay waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo jilicsan, dabacsan, qalab adkaysanaya oo u oggolaanaya isweydaarsiga nafaqooyinka iyo oksijiinta.
Adeegsiga hormarinta daabacaadda 3D, kooxaha ay hogaaminayaan Jordan Miller iyo Kelly Stevens waxay awood u yeesheen inay abuuraan shabakadan vascularization-ka iyadoo la adeegsanayo “prehydrogel” dareere ah, kaasoo adke marka la kulmo nalka buluugga ah.
Saynisyahanada ayaa ku celceliyay in tani ay tahay uun talaabo cusub oo loo qaaday abuuritaanka xubno si buuxda u shaqeynaya sheybaarka, oo wali ah xaqiiqda fog. Laakiin horumar ayaa la sameeyay, iyo in laga caawiyo horumarka mustaqbalka, kooxda ayaa daabacday xogteeda si bilaash ah oo u furan dadweynaha. Intaa waxaa u dheer, waxay abuureen qalab u gaar ah daabacaadda maraakiibta, oo loogu magac daray “qalabka injineerinka isteerinka farsamada ee stereolithography”, kaas oo kasbaday naaneys ahaan: SAXIIX. SLATE sidoo kale waxaa loo diyaariyay il furan oo u furan qof kasta oo raba inuu wax ku barto waxbarashadooda.
Xogta sahaminta waxaa lagu daabacay joornaalka joornaalka Mareykanka, laakiin sidoo kale si buuxda ayaa looga heli karaa Bogga rasmiga ah ee jaamacadda Rice, halkaasoo aad sidoo kale ka heli karto xiriiriyeyaal iyo xigashooyin loogu talagalay kuwa doonaya in ay dhex galaan nuxurka.
Via: Engadget Xigasho: Jaamacadda Rice